IZIMBONI ZIYAPHUMULA - I-Airbnb
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Jenni & Neil
U-Jenni & Neil Ungumbungazi ovelele
Balekela i-hustle & uhlale e-The Mills Rest khona kanye emagqumeni ase-Mt Imperer. Izindawo ezimangalisayo zezwe lase-Victorian High, i-Delatite River, kanye nezintaba eziphawulekayo & ama-terrains- kungakhathaliseki ukuthi uhamba ngezinyawo, ngebhayisikili, nge-ski noma ngebhayisikili elingcolile. I-Mills Rest iwukuhlala okulungele ukukujabulisa & nabanye abangaba ngu-11. Indawo yomlilo ethokomele esendlini yokukugcina ufudumele ngemva kosuku eqhweni, noma ehlobo, umpheme ongemuva one-BBQ, njengoba uhlezi futhi ubuka ukushona kwelanga okumangalisayo. Ilungele imindeni, izithandani noma amaqembu abangane.
I-Mills Rest iyikhaya elisanda kulungiswa futhi elihehayo, eliphakathi kwezihlahla endaweni yokuposa ye-Sawmill Settlement. Uhambo olufushane & oluhle lwamahora angu-2.5 ukusuka e-Melbourne. Awukwazi ukuthola indawo engcono, ukuba ngamakhilomitha angu-1.5 ukusuka emasangweni e-Mount Imperer (16km ukushayela ukuya esiqongweni)/i-Mount Stirling & a stone 's throw ukusuka e-Delatite River (400M), i-Merrijg Pub (13km), i-Mirimbah Local Store (2km), i-Delatite Winery (15km) ne-Mansfield (20km).
Uma ufuna iholide elibukekayo e-Victorian High Country eliseduze kwazo zonke izindawo ezithandwayo, khona-ke leli khaya leholide elizungezwe amahlathi aluhlaza lizokufanela. Sinesakhiwo esihle kakhulu esilala abantu abangu-12, endaweni yokugeza engu-4BR, engu-2.
Amakamelo amabili anombhede omkhulu onelineni esezingeni eliphezulu, elilodwa elinendlu eyakhiwe ngamapulangwe. Ikamelo lesithathu lihlanganiswe nemibhede eyi-1 x trio bunk (eyodwa phezulu & kabili phansi) & 1 x bunk bed (okukodwa phezulu & phansi). Ikamelo Lesine lihlanganiswe ne-1 x trio bunk. Amakamelo amathathu kwamane anezingubo zokugqoka nazo zonke izindwangu ezinikeziwe.
Ikhishi linakho konke okudingekayo kwezokuzijabulisa. Umshini we-Nespresso, i-microwave, umshini wokuwasha izitsha, amabhodi oshizi njll. Indawo yokudlela evulekile inetafula elikhulu lokudlela lokuzijabulisa eceleni kwendawo yomlilo wasendlini. Indawo yokuphumula ivulekile uhlelo olunomabonakude we-satelite kanye nentambo yekhompyutha yakho. Kanye nesidlali se-DVD esinabantu abadala nabantwana bama-DVD ukuze uyisebenzise. Siphinde sibe nezinketho zomdlalo webhodi nekhadi lakho uma ufisa ukuzisebenzisa.
Siphinde sibe nendawo yokuwasha egcwele enomshini wokuwasha nokomisa egumbini lokugezela lesibili okwazi ukungena kulo ngokuphelele. Zombili izindlu zokugezela zine-shower. Ayikho indlu yokugezela emakamelweni amanzi.
Ngaphezu kwalokho, sinekamelo lokomisa zonke izembatho zakho zokushushuluza eqhweni ebusika. Futhi ehlobo sinokhiye wamabhayisikili akho.
Kunenqwaba yokupaka emgwaqweni phambi kwegalaji emgwaqweni nasengaphambi kwendlu. Ayikho indawo yokupaka evunyelwe emgwaqweni.
Wonke amashidi ombhede namathawula okugeza & amathawula ezandla (ayikho imishini yokuwasha ubuso) ayatholakala. I-pantry inesitokwe sezinto eziyisisekelo - amafutha omnqumo, usawoti kanye nopelepele, ushukela, itiye, ikhofi, izinongo & ushokoledi oshisayo & ama-marshmellows ukukugcina ufudumele ebusika.
Emindenini enabantu abasebasha, sinesihlalo esiphakeme, amapuleti ezingane nezinto zokudlela.
Sicela uqaphele: Lena AKUYONA indlu yamaphathi. Asamukeli ama-bucks/izinkukhu noma ama-schoolies. Noma yimuphi umcimbi noma umcimbi ohilela abantu abeza endlini abangafakiwe ezivakashini ezihlalayo ezigunyaziwe kuzodingeka zixhumane nathi ngaphambi kokubhukha ukuze zivunyelwe. I-Sawmill Settlement iyiphakethe elithulile, elinenhlonipho & noma yimuphi umculo omkhulu ngaphakathi noma ngaphandle ngemva kuka-10pm ngeke ubekezelelwe omakhelwane. Siyakwazisa ukubambisana kwakho kulokhu & sithemba ukuthi uphatha ikhaya lethu njengokungathi elakho.
Ezinye izinto okufanele uziqaphele:
IZIVAKASHI EZENGEZIWE: Noma yiziphi izivakashi ezengeziwe zingase zivunyelwe ngumbungazi. Sicela uthumele umlayezo ukuze uthole imvume. Izivakashi ezengeziwe zizokhokhiswa u- $ 50pp/ubusuku.
I-INTHANETHI: ingaba yinto engavamile, ngakho-ke sicela ube nesineke. Ukusakaza kuzoba nzima kule ndawo. Ayikho I-WIFI enikeziwe, ngakho-ke sisikisela ukuthi ulethe i-laptop namabhayisikobho asevele afakiwe njengoba sinikeze ikhebula lezintambo.
Amashidi: Uma ufisa ukuletha ILINENI yakho singanciphisa amanani esevisi ukuze ahlalise abantu. Ngaphezu kwalokho, uma ubhukha okuncane kwabantu abangu-5, sicela uxhumane nathi ngaphambi kokwenza ukubhukha futhi singacabangela ukwehlisa izindleko zamashidi namathawula.
I-Sawmill Settlement iyindawo encane yokulala esigodini se-Victorian High Country. Ngena epokothweni le-Delatite River 400m ukusuka emnyango wangaphambili noma ubambe ibhasi ebusika ukuze ufike phezulu kwe-Mt Imperer (ukuhamba okungu-400M). Umzila wamakhilomitha angu- uzothola i-cafe encane ethandekayo e-Mirimbah. I-Thirsty - I-Delatite Winery (5 Start James Halliday Winery) iyibanga lemizuzu engu-15 kuphela uma uhamba ngemoto. Umzila wempophoma ongungxantathu uwuhambo oluyindilinga lwamakhilomitha angu-7 ukusuka e-The Mills Rest doorstep.
Ibungazwe ngu-Jenni & Neil
Best friends who have been together for 22 years. We love adventures, food, great wine & new places. Both of us were fortunate enough to travel the world playing professional sport in a previous life. Now settled in Melbourne, Australia ,with our own Airbnb Hosting adventure in the Victorian High Country, at the foothills of Mt Buller.
Best friends who have been together for 22 years. We love adventures, food, great wine & new places. Both of us were fortunate enough to travel the world playing professional…
Lapho ubhukha uzothola yonke imininingwane edingekayo yokuhlala kwakho nge-imeyili. U-Jenni no-Neil bazothintwa nge-imeyili, i-SMS & ucingo phakathi naso sonke isikhathi sokuhlala kwakho.
UJenni & Neil Ungumbungazi ovelele